ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားခြင်း (၂၀၁၄) - Your Brain On Porn
ကိုကင်းစွဲကျော်လွှား၏ yin နှင့် yang (2014)
ကိုကင်းစွဲကျော်လွှား၏ yin နှင့် yang
စက်တင်ဘာလ 4, 2014
Yaoying Ma ကဇီဝဗေဒသည်သဘာဝအားဖြင့် yin နှင့် yang တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုတွန်းအားပေးသည်။
စွဲ, အထူးသဖြင့် relapse, သူမကိုတွေ့မရှိချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Ma သည် Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှ Kenneth P. Dietrich အနုပညာနှင့်သိပ္ပံကျောင်းမှ neuroscience လက်ထောက်ပါမောက္ခ Yan Dong ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်သုတေသနလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ဂျာနယ်တွင်ယနေ့အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသောစာတမ်း၏အဓိကရေးသားသူဖြစ်သည် အာရုံခံဆဲလျ ကကိုကင်း relapse တိုက်ခြင်းနှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ relapse ၏ဝံပုလွေထားရန်နည်းလမ်းအဖြစ်အခ်ါ Anti-စွဲတုံ့ပြန်မှုတက်တချက်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်မည်အကြောင်း posits ။
ဤစာတမ်းသည်သဘာဝအရအာရုံကြောပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ကိုကင်းအသုံးပြုမှုကိုပြန်လည်မပြုခြင်းကိုခုခံနိုင်သည့် ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်တည်ရှိမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအလုပျထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ဒေါင်နှင့်သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကကောက်ယူလတ်တလောလေ့လာမှုအပေါ်တစ်ဦးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါသည် သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလ။ ဦး နှောက်အတွင်းရှိသေးငယ်သောဆုလာဘ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောနျူကလိယအက်တမ်ရှိနဗ်ကြောဆဲလ်များအပေါ်ကိုကင်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်အဖွဲ့သည်ကြွက်မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ၄ င်းတို့သည် synapses ၏အခန်းကဏ္--ကို - စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အာရုံကြောဆဲလ်များ၏စွန်းပိုင်းတွင်အချက်ပြမှုကိုထပ်ဆင့်လွှင့်သည်။
ယင်း၏အစီရင်ခံအဖွဲ့ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ ကြွက်တစ်ကောင်သည်ကိုကင်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါအချို့သောနုသောအစုများထုတ်လုပ်ခြင်းကို“ တိတ်ဆိတ်သော synapses” ဟုခေါ်ကြသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည် semifunctional နှင့်ပုံမှန်ဇီဝကမ္မအခြေအနေအောက်တွင်အချက်ပြမှုအနည်းငယ်ပေးပို့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြွက်သည်ကိုကင်းကိုမသုံးတော့ပါကထိုအသံတိတ်သောဆိုင်းနပ်စ်များသည်ရင့်ကျက်သောအဆင့်သို့ရောက်သွားပြီးအချက်ပြခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်သူတို့၏အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်မှုကိုရရှိသည်။ ကြွက်များသည်ယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သည့်ရောဂါများနှင့်ထိတွေ့ပါက၎င်းတို့သည်အချက်ပြမှုများပေးပို့နိုင်ပြီး၊
လက်ရှိ အာရုံခံဆဲလျ “ အသံတိတ် synapse” ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၏အခြားတစ်ဘက်ရှိကြောင်းစက္ကူကဖော်ပြသည်။ ကိုကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်နျူကလိယနျူကလိယမှတိကျသော cortical projection တွင်ထုတ်လုပ်သောအသံတိတ် synapses များသည်ကိုကင်းမှထုတ်ယူပြီးနောက်“ unsilenced” ဖြစ်လာပြီးဤ cortical projection ၏နက်ရှိုင်းသောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပိုဆောင်းစမ်းသပ်ချက်များကဤ cortical စီမံချက်၏အသံတိတ် synaps-based remodeling ကိုကင်းတဏှာလျော့နည်းစေသည်။ အရေးကြီးတာကဒီ anti-relapse circuitry remodeling ကိုကင်းထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာစွဲလမ်းမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်နည်းလမ်းရှိသည်။
စာတမ်း၏အကြီးတန်းစာရေးဆရာဒေါင်ကပြန်လည်အားဖြည့်လိုသောဆန္ဒသည်ကိုကင်းနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အဓိကဖြစ်သည်ဟုဆိုသည် ဦး နှောက်အတွင်း၌ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုဆန့်ကျင်သောတုံ့ပြန်မှုများရှိသဖြင့်ကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန်ဆေးခန်းကိုပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Ma ကဤတွေ့ရှိချက်သည်ဤ yin-yang ချိန်ခွင်ကိုကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းများကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေပြီးပြန်လည်ထူထောင်မှုကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် neurobiological ပစ်မှတ်အသစ်များကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။
“ ဒီဇာတ်လမ်းကဒီနေရာမှာမပြီးသေးဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နေပြီး၊
အထက်ပါပုံပြင်အပေါ်အခြေခံသည် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ကပံ့ပိုး ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှ. မှတ်ချက်: ပစ္စည်းများအကြောင်းအရာနှင့်အရှည်များအတွက် edited နိုင်ပါသည်။
Yao အဘိဓါန်-Ying ကဒုတိယ Ma et al ။ Accumbens စီမံကိန်း Prefrontal Cortex ၏အသံတိတ် synapses-အခြေခံပြီးပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေးများကကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား၏ Bidirectional Modulation. အာရုံခံဆဲလျစက်တင်ဘာလ 2014 Doi: 10.1016 / j.neuron.2014.08.023